190g pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခု LC-68-3 ဘို့မီးဖိုတပ် ချ. - တရုတ် Cixi ပင်လယ်ပြင် Anchor ဖိအား Lantern
190g pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခု LC-68-3 ဘို့မီးဖိုတပ် ချ.
ဖော်ပြချက်: သာ, ကအကြောင်းအရာ 190g pierceable butane ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုလိုက်နာ EN417-type အမျိုးအစား 200 (TUV type ကိုခွင့်ပြုချက် 02 ငါ 99) ဖြင့်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရဲ့များတွင်အသုံးပြုကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ဧရိယာများအတွက်အိတ်ဆောင်ငွေ့ဖိအားဓာတ်ငွေ့မီးဖို, ဓာတ်ငွေ့မှာရော်ဘာတံဆိပ်ကိုအတူထိုး pin ကို ဝင်ပေါက်ဆိုဓာတ်ငွေ့ leakage.the ဓာတ်ငွေ့ဝင်ပေါက်ဓာတ်ငွေ့ inlet.the ဓာတ်ငွေ့ကိုထိပုတ်ပါ variable နဲ့ဆေးထိုးအပ်အဆို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ဝက်အူ nut.The ထိန်းညှိဓာတ်ငွေ့ကိုထိပုတ်ပါရန်ပေါင်းစပ်အဆိုပါပစ္စည်းတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်သည့်အရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက် enclosure မှ fixed ဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ..
သာ, ကအကြောင်းအရာ 190g pierceable butane ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုလိုက်နာ EN417-type အမျိုးအစား 200 (TUV type ကိုခွင့်ပြုချက် 02 ငါ 99) ဖြင့်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရဲ့များတွင်အသုံးပြုကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ဧရိယာများအတွက်အိတ်ဆောင်ငွေ့ဖိအားဓာတ်ငွေ့မီးဖို, ဓာတ်ငွေ့မှာရော်ဘာတံဆိပ်ကိုအတူထိုး pin ကို ဝင်ပေါက်ဓာတ်ငွေ့ inlet.the ဓာတ်ငွေ့ကိုထိပုတ်ပါ variable ကိုအနေအထားနှင့်အတူတစ်ဦးဆေးထိုးအပ်အဆို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ဓာတ်ငွေ့ကိုထိပုတ်ပါရန်ပေါင်းစပ်အဆိုပါပစ္စည်းတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်မည်သည့်ဓာတ်ငွေ့ leakage.the ဓာတ်ငွေ့ဝင်ပေါက်သည့်အရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ဝက်အူ nut.The ထိန်းညှိ enclosure မှ fixed ဖြစ်ပါတယ်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ထည့်လေးလက်ချောင်းများနှင့်အတူတစ်ခုတည်းဒယ်အိုးထောက်ခံမှုနှင့်အတူတပ်ဆင်ပါတယ်။
သံမဏိမီးဖိုပန်းကန်နှင့်ပုဒ်မ, သံမဏိ burner ကြေးဝါအဆို့ရှင်, ကို ABS ကွန်တိန်နာ။
လူပျို burner, တစ်ခုတည်း injector (0.24mm) ။
burner အမျိုးအစား: သံမဏိ Ring ကိုရေးထည့်ပါ။
Power: 1.1kW, စားသုံးမှု: 80g / h
ဘ အရည်အတွက် ဘ ဘ CTN အရွယ်အစား:
429G / PC ကို 24PCS / CTN 12KGS / CTN 16KGS / CTN 48X36X42CM
9,240PCS / 20 ''
18,480PCS / 40 ''
ယခင်: 190g pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခု LC-68-2 ဘို့မီးဖိုတပ် ချ.
နောက်တစ်ခု: 190g pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခု LC-75 တို့အတွက်မီးဖိုတပ် ချ.
Valve နှင့်အတူစခန်းဂတ်စ်မီးဖို Burner
Butane ဂတ်စ်မီးဖိုတပ် ချ.
ဂတ်စ်မီးဖိုဂတ်စ် Cooker တပ် ချ.
190g Pierceable ဓါတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုသည်မီးဖိုတပ် ချ.
230g ဓါတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခု Threaded အမျိုးအစားကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်သည်မီးဖိုတပ် ချ.
500g Pierceable ဓါတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုသည်မီးဖိုတပ် ချ.
Mini ကိုမီးဖိုတပ် ချ.
အိတ်ဆောင် Butane ဂတ်စ်မီးဖို
500g pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုဘို့မီးဖိုတပ် ချ. ...
190g pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုဘို့မီးဖိုတပ် ချ. ...